Google Photos dia manomboka manavao ny maody maizimaizina | Androidsis
Ignatius Room | | Fampiharana Android, sary
Ny olan'ny fanaparitahana amin'ny Android dia mitohy mankarary andoha an'i Google, na eo aza ny zava-misy ao amin'ireo kinova roa farany, tamin'ny alàlan'ny Project Treble, dia nanandrana nampihena azy. Androany ary rehefa hanomboka ny Android Q, misy Android 10 Pie amin'ny fitaovana XNUMX%.
Iray amin'ireo zava-baovao farany avy amin'ny tanan'ny Android Q, ny mode mainty, fomba iray izay hanova ho azy ny lokon'ny rindranasa, manomboka amin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty, amin'ireo rehetra izay mifanaraka. Na izany aza tsy ny rehetra no afaka manatsara ny Android Q, farafaharatsiny farafaharatsiny.
Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay maniry mankafy maody maizimaizina ao amin'ny tobiny, terminal izay tsy hanavao ny Android Q, raha izany no izy. Google dia manavao ny fampiharana ampiany amina lohahevitra maizina. Talohan'izay dia samy manolotra azy ny fampiharana ny Kalandrie sy ny Google Keep. Ny fampiharana farany manampy an'ity lisitra lava ity dia ny Google Photos.
Ireo tovolahy ao amin'ny Google dia nanomboka namoaka fanavaozana vaovao amin'ny Google Photos, izay manampy ny safidy hampavitrika tanana maody maizina amin'ny fampiharana. Toy ny amin'ny rindranasa Google hafa, ity maody maizina ity dia manana loko volondavenona mainty fa tsy mifidy mainty tanteraka, izay mety indrindra, hanararaotra ireo tombony atolotry ny efijery OLED amin'ny resaka fanjifana herinaratra.
Na ny saha fikarohana na ny fitetezana ambany somary maivana kokoa ka hita haingana kokoa izy io. Ity maody maizina ity, noho ny tsy fitovizany, dia hahatonga ireo sary natsangatsika hisongadina bebe kokoa noho ny amin'ny fiaviana fotsy nentim-paharazana.
Ity maody vaovao ity dia tsy tonga amin'ny endrika fanavaozana, vita amin'ny haavon'ny mpizara izany, noho izany dia mila mandalo ilay rindranasa tsy tapaka fotsiny isika hijerena raha efa nampidirina io safidy io isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny Google Photos dia manomboka manavao amin'ny alàlan'ny fampidirana maody maizina